လူမှုရေးသိပ္ပံ Key ကိုသီအိုရီအယူအဆများ
by အက်ရှလေ Crossman
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့် Critique သည်
သူတို့အသက်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်လာအဖြစ်ဆဲပါသီအိုရီလူမှုရေးဘဝကအတွေ့အကြုံကနေဆဲပါတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ သီအိုရီ, အချိန်ကျော်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူဦးရုပ်သိမ်းပေးရန်, ဒါမှမဟုတ်ထံမှ disengage သောလူကြီးအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုမှဗဟိုသောလူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်ဆံရေးကဖော်ပြသည်။ ကလူမှုရေးစနစ်ဟာတည်ငြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ပြုခြင်းနှင့်အမိန့်အဖြစ် functionalist သီအိုရီအဖြစ်, ဒီမူဘောင်, လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အကျိုးရှိသောဆဲပါ၏လုပ်ငန်းစဉ်တတ်၏။
ဆဲပါသီအိုရီလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များ Elaine Cumming နဲ့ William Earl ဟင်နရီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်ဟောငျးကြီးထွားလာတိကျမ်း၌ပေးအပ်ပါကင်ထဲကလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအိုမင်း၏ပထမဦးဆုံးလူမှုရေးသိပ္ပံသီအိုရီဖြစ်ခြင်းအဘို့နှင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထူးဆန်းသောဖြစ်ပါတယ် 1961 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, ဖြစ်စေခဲ့သည်ခံခဲ့ရ နောက်ထပ်လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြောင်းကိုသီအိုရီများ, သူတို့ရဲ့လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ။
ဒါကသီအိုရီအအိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်လူမှုရေးစနစ်တကျဆွေးနွေးမှုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်လူမှုဘဝတွေကို၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တင်ဆက် functionalist သီအိုရီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည် ။ တကယ်တော့, ကျော်ကြားတဲ့လူမှုဗေဒပညာရှင် Talcott Parsons ဦးဆောင် functionalist အဖြစ်မှတ်သူသည်, Cumming နှင့်ဟင်နရီရဲ့စာအုပ်ဖို့စကားချီးရေးသားခဲ့သည်။
သီအိုရီနှင့်အတူ, Cummings ကနှင့်ဟင်နရီလူမှုစနစ်အတွင်းအိုမင်းတည်ရှိကြနှင့်ဆဲပါ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတဦးတည်းအသက်အရွယ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒီအတစ်ခုလုံးအဖြစ်လူမှုရေးစနစ်ဟာရန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်အကျိုးရှိပုံကိုဖျောပွကြောင်းခြေလှမ်းများအစုတခုကိုဆက်ကပ်။
သူတို့ကချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအားဖြင့်ကောက်ယူအရွယ်ရောက်ဘဝတွင် Kansas City လေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့သီအိုရီ, အလယ်တန်းကနေအသက်ကြီးမှရာပေါင်းများစွာသောလူကြီးများခြေရာခံတဲ့ longitudinal လေ့လာမှု, အခြေခံပါတယ်။
ဒီဒေတာကိုအပေါ်အခြေခံပြီး Cummings ကနှင့်ဟင်နရီဆဲပါ၏သီအိုရီပါဝင်ကြောင်းအောက်ပါကိုး postulates ဖန်တီးခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး disengage မှစတင်အဖြစ်, သူတို့က ပို. ပို. မှလွတ်မြောက်နေကြသည် အပြန်အလှန်ပဲ့ပြင်ထားတဲ့လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း ။ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူထိတွေ့ဆုံးရှုံးဆဲပါ၏လုပ်ငန်းစဉ်အားနှင့်လောင်စာ။
ဆဲပါ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့နေဆဲအပြည့်အဝသူတို့ရဲ့လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍအတွက်စေ့စပ်နေစဉ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသူတို့၏ဂုဏ်သတင်းရှိသည်မဟုတ်မှတစ်ဦးချင်းရဲ့အလိုဆန္ဒအားဖြင့်အားမာန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းငယ်ရွယ်သောလူကြီးများ disengage သောသူတို့သည်ကစားသည့်အခန်းကဏ္ဍကျော်ယူလိုအပ်သောအသိပညာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကဒီဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါအပြီးအစီးဆဲပါတွေ့ကြုံတတ်၏။ တဦးတည်းအဆင်သင့်ပေမယ့်အခြားမပါသောအခါနှစ်ခုအကြားတစ်ဦးက disjunction ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုအကျပ်အတည်းခံရသို့မဟုတ် demoralized ဖြစ်လာမှမဟုတ်သကဲ့သို့အသစ်သောလူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍချမှတ် disengaged ကြသူလူများက။
သူတို့အသက်တာ၌ကျန်ရှိနေသောရေတိုအချိန်သတိထားဖြစ်ကြပြီးသူတို့မရှိတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိလူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍဖြည့်ဆည်းရန်ဆန္ဒရှိသည့်အခါတစ်ဦးကလူတစ်ဦး disengage ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏ နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနျူကလီးယားမိသားစုတစ်စု၏လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မှအသက်လာမယ့်သူတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆဲပါဘို့ခွင့်ပြု, နှင့်လူသေဆုံးလို့ပဲ။
disengaged ပြီးတာနဲ့ကျန်ရှိသောဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲ, သူတို့ထဲကဆုလာဘ်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ, အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ဤအ postulates အပေါ်အခြေခံပြီး, Cummings ကနှင့်ဟင်နရီသူတို့လကျခံပွီးလိုလိုလားလားဆဲပါ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူသွားရသည့်အခါသက်ကြီးရွယ်အိုများပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ဆဲပါ၏သီအိုရီအဖြစ်မကြာမီကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာစေ၏။ အချို့ဝေဖန်သူများက Cummings ကနှင့်ဟင်နရီလုပ်ငန်းစဉ်, သဘာဝပင်များနှင့်မလွှဲမရှောင်အဖြစ်တစ်လောကလုံးကြောင်းယူဆသောကွောငျ့ဒီချို့ယွင်းချက်လူမှုရေးသိပ္ပံသီအိုရီခဲ့ကြောင်းထောက်ပြသည်။ functionalist နှင့်အခြားသီအိုရီအမြင်များအကြားလူမှုဗေဒအတွင်းအခြေခံပဋိပက္ခ Evoking အချို့သောသီအိုရီကြောင်းထောက်ပြ လုံးဝလူတန်းစား၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျစ်လျူရှု အခြားသူတွေသက်ကြီးရွယ်အိုများသောယူဆချက် critiqued နေစဉ်အိုမင်း၏အတွေ့အကြုံကိုပုံဖော်အတွက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထင်ရသောအဘယ်သူမျှမအေဂျင်စီရှိ ပေမယ့်အစား, လူမှုစနစ်၏လိုက်နာ tools များဖြစ်ကြသည်။
ထို့ပြင်နောက်ဆက်တွဲသုတေသနအပေါ်အခြေခံ, အခြားသူများဆဲပါ၏သီအိုရီသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ရှုပ်ထွေးပြီးကြွယ်ဝတဲ့လူမှုရေးဘဝတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းအခိုင်အမာနှင့်အငြိမ်းစားယူကိုလိုက်နာကြောင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ပုံစံအမျိုးမျိုး ( "အသက်ကြီးလူကြီးများ၏လူမှုရေးချိတ်ဆက်: တစ်ဦးကအမျိုးသားကိုယ်ရေးဖိုင်" ကိုကြည့်ပါ Cornwall et al ။ , 2008 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းထုတ်ဝေ) က။
ခေတ်ပြိုင်လူမှုဗေဒပညာရှင် Arlie Hochschild လည်းဒီသီအိုရီ၏ဝေဖန်မှုထုတ်ဝေမှတ်ချက်ချသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး disengage ဘူးတဲ့သူတွေကိုပူပဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အဖြစ်ယူဆနေကြသည်ဌာန၏ "အပိုဒ်, လွတ်မြောက်ရန်" ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကိုအမြင်ကနေသီအိုရီချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမလည်းဆဲပါလိုလိုလားလားပြုမိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပျက်ကွက်မှုအတွက် Cummings ကနှင့်ဟင်နရီ critiqued ။
Cummings ကသူမ၏သီအိုရီအနေအထားမှမှီဝဲနေစဉ်, ဟင်နရီနောက်ပိုင်းတွင်အကြာတွင်မြေားတှငျက disavowed နှင့်လှုပ်ရှားမှုသီအိုရီများနှင့်ဆက်လက်သီအိုရီအပါအဝင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းအခြားရွေးချယ်စရာသီအိုရီနှင့်အတူမိမိကိုမိမိ aligned ။
Cumming နှင့်ဟင်နရီ, 1961 နေဖြင့်ကြီးထွားလာဟောငျး။
"ဟုအဆိုပါနှစ်မှတဆင့်ဘဝအသက်: အသက်တာ၏ Styles နှင့်အောင်မြင်သောအို" Wiliams နှင့် Wirths, 1965 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
"ဆဲပါသီအိုရီ: တစ်ဦးကဝေဖန်အကဲဖြတ်," ဂျော့ခ်ျအယ်လ် Maddox, Jr. အဆိုပါ Gerontologist, 1964 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
"ဆဲပါသီအိုရီမြား: A Critique သည်နှင့်အဆိုပြုချက်," Arlie Hochschild အမေရိကန်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 40 မျှဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။5(1975): 553-569 ။
"ဆဲပါသီအိုရီမြား: A, Logical အင်ပါယာနှင့်ဖြစ်စဉ် Critique သည်," Arlie အချိန်အတွက် Hochshchild, အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဟောငျးခေတ်, 1976 ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်။
"အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၏ Kansas City လေ့လာမှုပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်: လူမှုရေး gerontology အတွက်ဆဲပါမော်ဒယ်များ၏အမြစ်များကို" ဂျေ Hendrick, Getontologist 1994 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Nicki Lisa ကိုကိုးလ်, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
ကို 'အမေရိကန်အရည်ပျော် Pot' '၏အဓိပ္ပာယ်နားလည်ခြင်း
Fast Food အတွက် Filler အမျှ Worms တွေရဲ့မြို့ပြဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအနောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား
Desire Named A Streetcar - ရှိသူများသုံး
အမေရိကန်ခရီးသွားအေးဂျင် Hajj နှင့် Umrah ခရီးများထွက်ခြင်းအဘို့အ Authorized
ထိပ်တန်း 10 Usher သီချင်းများ
Tabla နှင့် Jori စည်သတ်မှတ်ပေးသည်ဝယ်ယူ
အဆိုပါဘော်စတွန်အသတ်ခံရမှုအားဖြင့် Left မေးခွန်းလွှာ
ပုဂံသိန်၏ Concept ကိုယုံကြည်ပါသလား
ဒုတိယဘာသာစကား (L2) ဆိုတာဘာလဲ
1950 ၏ Group မှဒေသများအက်ဥပဒေအမှတ် 41
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ